Wararka - Dareemka ku jira mashiinka meelaynta SMT waa mid aad u muhiim ah, wuxuu leeyahay nooc cayiman
Mashiinka meelaynta wuxuu u dhigmaa aalado otomaatig ah. Ficiladeeda oo dhan waxaa gudbiya dareemayaal kadibna xukuma oo ku shaqeeya maskaxda weyn. Shirkadaha Topco waxay kula wadaagi doonaan in mashiinka meelayntu leeyahay nooc dareemayaal cayiman.
1. Dareeraha cadaadiska
Mashiinka meelaynta, oo ay ku jiraan silsilado kala duwan iyo matoorro faaruq ah, ayaa leh shuruudo gaar ah oo loogu talagalay cadaadiska hawada. Marka cadaadiska ay u baahan yihiin qalabku hadhow loo baahdo, mashiinku si caadi ah uma shaqeyn karo, dareeraha cadaadiska ayaa had iyo jeer la socda isbedelka cadaadiska. Marka aan caadi ahayn, waxay si dhakhso leh u qaylin doontaa, Si loo xusuusiyo hawlwadeenka inuu wax ka qabto waqtiga.
2. Dareemida cadaadiska xun
Mashiinka nuugista ee mashiinka meelaynta ayaa nuugaya qaybo cadaadis diidmo ah, oo ka kooban matoor cadaadis taban (matoor mashiinka faaruqiyaha) iyo dareeraha dareeraha. Haddii cadaadiska taban uusan ku filnayn, qaybaha ma awoodi doonaan inay nuugaan. Markuu sheygu uusan lahayn wax qaybo ah ama qaybaha ay ku dheganyihiin bacda maaddada oo aan la nuugi karin, sanka nuugista ma nuugi doono qaybaha. Xaaladahaani waxay saameyn ku yeelan doonaan howlaha caadiga ah ee mashiinka. Dareeraha cadaadiska taban ayaa had iyo jeer kormeera isbeddelada cadaadiska xun. Marka qaybaha aan la nuugi karin ama aan la nuugi karin, waxay si dhakhso leh u qaylin kartaa inay xasuusiso hawlwadeenka inuu beddelo quudiyaha ama hubiyo haddii nidaamka cadaadiska xun ee nuugista la geliyay.
3. Dareeraha sawirka
Bandhigga waqtiga-dhabta ah ee xaaladda shaqaynta ee mashiinka meelaynta ayaa inta badan qaadata sawir-qaade sawir CCD ah, kaasoo soo ururin kara calaamado sawirro oo kala duwan loo baahan yahay, oo ay ku jiraan booska PCB-ka, cabbirka qalabka, iyo iyada oo loo marayo falanqaynta iyo ka-shaqeynta kumbuyuutarka, meelaynta madaxa ayaa dhameystiri kara shaqada hagaajinta iyo meelaynta.
4. Dareenka booska
Gudbinta iyo meeleynta guddiga la daabacay, oo ay ku jiraan tirinta PCB-yada, ogaanshaha waqtiga-dhabta ah ee dhaqdhaqaaqa madaxa meelaynta iyo kan shaqada, iyo dhaqdhaqaaqa habka caawinta, dhammaantood waxay leeyihiin shuruudo adag oo ku saabsan booska. Jagooyinkaan waxaa loo baahan yahay in lagu xaqiijiyo qaabab kala duwan oo dareemayaal boos ah.